Fahadisoan'ny alika izay tsy tokony hataontsika | Tontolo alika
Raha manana alika ao an-trano ianao dia ho fantatrao, ny fahasarotana amin'ny fampianarana sy fikarakarana azy ireo Araka izay mendrika azy ireo. Ireo namantsika mahatoky, hatramin'ny nahaterahany, dia tsy mahalala izay tokony ho fitondran-tena arahiny. Isika no mila mitarika azy ireo, toy ny hoe zaza kely izy ireo mba hahafantaran'izy ireo mitondra tena araka ny tokony ho izy ao an-trano sy eo amin'ny fiaraha-monina.
Na izany aza, ny tsy fananana traikefa sy ny tsy fahampian'ny fahalalana dia ataovy izay hahatonga ny tompona hanolo-tena lesoka amin'ny alika izay, raha tsy voalamina tsy ho ela, dia mety hiteraka fahazaran-dratsy izay sarotra amboarina.
1 Omeo loka be loatra izy ireo
2 Manomeza olona azy ireo
3 Sazio matetika izy ireo
4 Fanomezana firaiketam-po be loatra azy ireo
5 Mandrosoa fatratra azy ireo
6 Asaivo zatra matory am-pandriana izy ireo
7 Avelao izy ireo ela loatra
8 Aza mitondra azy ireo mitsangantsangana
Omeo loka be loatra izy ireo
Na dia marina aza izany dia mianatra mora kokoa ny alika raha toa ka mampiasa valisoa handrisika azy ireo isika. Na izany aza, tsy tokony ho ny sakafonao lehibe iretoRaha tsy izany dia hiafara amin'ny fahatakaran'izy ireo azy ireo ho zavatra mahazatra izy, fa tsy ho loka. Manoro hevitra anao izahay mba hanatona ireo loka amin'ny fomba fijery hafa: ny loka dia tsy voatery ho vatomamy fotsiny, mety ho firenena mandeha an-tendrombohitra ihany koa io.
Manomeza olona azy ireo
Aza maneso ny volonao volo mieritreritra azy ireo ho toy ny olona, ​​ohatra mitafy azy na mandoko ny hoho. Raha raisinao ho toy ny olombelona izy dia hataony toy ny alika. Aza adino fa ny amboadia dia zanak'olo-mpiray tam-po aminy faharoa, ary biby izy ireo, ary raha izany dia tsy mankasitraka ny lamaody izy ireo, ary tsy mahatsiaro ho mahafinaritra kokoa raha manao loko iray na hafa.
Sazio matetika izy ireo
Aza mampijaly azy ireo mihitsy amin'ny sazy. Tsarovy izany fitaovana fanabeazana ny sazy, tsy zon'ny fahefana. Tokony hampiasaina fotsiny izy io rehefa misy lesoka vita, tsy aorian'izay, satria tsy ho takatr'ilay biby mihitsy hoe inona no sazy tokony hitranga. Aza adino koa izany ny sazy dia tsy tokony hatao amin'ny herisetraAmpy izay ny milaza amin'ny fomba mazava sy mahery: TSIA Etsy ankilany, ny sazy ampiasaina be loatra dia hahatonga ny alika hanana toetra mampiahiahy sy matahotra ihany.
Mety hahaliana anao izany: Ahoana ny fanasaziana alika
Fanomezana firaiketam-po be loatra azy ireo
Mifanohitra tanteraka amin'ny teboka teo aloha, fa tsy latsa-danja kokoa. Mime entina amin'ny faran'izay diso dia fahadisoana ataontsika tsy tapaka. Ny alika, mazava ho azy, mankafy ny fitiavan'ny tompony, ilain'izy ireo izany mba hahatsapany fifaliana sy fifandanjana, fa ny fitiavana tsy midika hoe fanorohana sy famihinana 40 isa-minitra. Ny fitiavana tsy misy fepetra dia filan'ny tompony bebe kokoa noho ny filan'ny alika. Manantona antsika hitady fitiavana izy ireo, saingy amin'ny endrika fitsipika, hetsika, fitarihana, lalao sns. Miezaha mifehy ny fitiavana tsy misy fepetra mba hitombo ny alika amin'ny fihetsika mahay mandanjalanja. Na dia vita kely aza dia tsy hisy koa.
Mandrosoa fatratra azy ireo
Ny teny TSIA, tena ilaina tokoa ny mahafantatra ny fampiasana azy. Aza matahotra milaza amin'ny volonao fa misy zavatra tsy tokony hataony satria tsy mety izany. Tsy maintsy mamaritra fetra ianao. Mora mahazo azy ireo izy ireo, mahazo ny hajany amin'ny fanomezana baiko rehefa nanao zavatra tsy tokony hataony. Zava-dehibe ny hijerenao fa azony sy nankatoaviny izany, tamin'ity fomba ity, amin'ny manaraka dia ho fantany fa tsy tokony hataony izany. Ny fanekena, na izany aza, dia midika tsy firaharahiana sy fahazarana izay, rehefa mandeha ny fotoana, dia ho lasa tsy azo ahitsy.
Asaivo zatra matory am-pandriana izy ireo
Na matory eo am-pandriana ny alika na tsia dia fanapahan-kevitra iray izay tsy maintsy ataonao irery sy irery. Mazava ho azy, raha mikasa ny hamela azy ireo hampakatra vetivety ianao dia tadidio izany ho zatra an'izany izy ireo ary hangataka anao hatory isan'andro isan'andro. Ho azy ireo, ny fandriana no safidy ahazoana aina indrindra, ary etsy ankilany, satria avo kokoa izy ireo, dia takatr'izy ireo fa amin'ny ambaratonga ambony dia mitovy ambaratonga aminao izy ireo. Amin'ny fonosana, ny amboadia matory ambony indrindra no mpitarika.
Mety hahaliana anao izany: Matory amin'ny alika
Avelao izy ireo ela loatra
Ny alika tsy raharahaina dia alika tsy faly. Ny famelana azy ireo irery mandritra ny fotoana ela dia hidika izany fa mamorona fihetsika tsy mendrika, olona mitaintaina sy mitebiteby ary tsy fahatokisana ny ambin'izao tontolo izao. Ny fifandraisana isan'andro amin'ny tompony sy ny alika hafa dia tena ilaina tokoa amin'ny fifandanjana ara-pihetseham-po sy ara-tsaina an'ireo alikantsika volo.
Aza mitondra azy ireo mitsangantsangana
Tsy vitan'ny hoe mila mifamatotra izy ireo fa zava-dehibe koa ny fanarahan-dalàna. Tian'izy ireo ny mitsoka, mihazakazaka, miaina fahatsapana vaovao ary mahita fofona vaovao. Aza esorina aminy izao filàna lehibe izao, avoahy tsy tapaka izy ireo mba hanamaivanana ny tenany sy hialany amin'ny heriny. Amin'izany fomba izany dia hatory tsara kokoa izy ireo, hataony maloto ny trano, ary ny tena zava-dehibe dia ho faly kokoa izy ireo.
Mety hahaliana anao izany: Inona no fomba tsara indrindra handehanana amin'ny alika
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Tontolo alika » Alika ankapobeny » Training » Fahadisoan'ny alika izay tsy tokony hataontsika mihitsy
Fa maninona ny alikako no mihinana taratasy
Fiaraha-miasa amin'ny alika voaararaotra amin'ny fananganana azy